Baarlamaanka Shiinaha Ayaa Meel Marinaya Sharci Muran Dhaliyey Oo ay Ugu Tala Gashay Amniga Hong Kong. | Gaaroodi News
May 22, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Tanya Chan waxay sheegtay “taariikhdi ugu xumeyd ee Hong Kong soo wajahday”
Xukumadda Shiinaha ayaa diyaarisay sharci muran dhaliyey oo ay dooneyso iney Hong Kong ka hirgeliso, uuna meel mariyo baarlamaanka Shiinaha oo uu maanta u billaabmayo shirweynihiisi siyaasadeed ee ugu weynaa sanadkan.
Dastuur hoosaadka Hong Kong wuxuu dhigayaa iney Hong Kong awood u leedahay iney soo saarto shuruucda amniga lagu ilaalinayo loogana hortagayo “Khiyaamo qaran, gooni iisu taag iyo kacdoon”.
Hase yeeshee, sharci noocaasi weli kama hirgelin Hong Kong balse Shiinaha ayaa hadda gadaal ka riixaya sidi sharci noocaasi loo meel marin lahaa.
Golaha Koongareska qaranka ee Shiinaha wuxuu inta badan meel mariyaa go’aannada ka soo baxa hogaanka sare ee xisbiga hanti wadaagga Shiinaha.
Hong Kong “waa ismaamul gooni ah” oo hoos taga Shiinaha, waxaana loo arkaa “hal dal oo haddana laba nidaam ku dhaqamaya” tani iyo marki ay xorriyadda Hong Kong dib u soo celisay Britain 1997-kii.
Sanadki hore Hog Kong waxaa ka dhacay mudaharaadyo rabshada wata oo ay shacabka mudaharaadaya ku dalbanayaan isbeddello sal ballaadhan.
Dadka u ololeeya dimuqraadiyadda ayaa cabsi weyn ka muujiyey sharcigan uu Shiinaha gadaal ka riixayo ay ku sheegeen “dhammaadkii Hong kong”, meeshana ay ka baxayso madaxbannaaidi gobolka iyo xorrriyadda.
Hoggaanka sare ee Shiinahana waxay sheegeen iney aaminsan yihiin sharciga ay soo saarayaan inuu noqon doono mid loga hortago mudaharaadyada muddada dheer ka socdo Hong Kong.
Beijing maxay damacsan tahay iney sameyso?
Sida uu dhinaca sharciga aasaasiga ee ku saleysan dastuur hoosaadka Hong Kong loo baahan yahay xukumadda Hong Kong iney meel mariso sharcigan amniga qaranka ku saabsan.
Hase yeeshee, 2003-dii ayey dad ka badan 500,000 isku dayeen iney mudaharaadyo isugu soo baxaan balse isku dayadaasi ay fashilmeen.
Hong Kong waxaa ka jirta dimuqraadiyad iyo xorriyadda hadalka oo kaduwan dalweynaha Shiinaha intiisa kale.
Mucaaradku halista jirta maxay ku sheegeen?
Dad badan oo ka mid ah dadka u ololeeya dimuqraadiyadda ee hormuudka ka aha Hong Kong ayaa welwel iyo cabsi aad u weyn ka muujiyey iyaga oo sharciga amniga uu shiinaha soo wado ku tilmaamay gabagabadi Hong Kong.
Dennis Kwok wuxuu sheegay “haddii ay arrintan sideeda u dhacdo waxaa si rasmi ah meesha uga baxayo nidaamki ahaa ‘hal dal iyo laba nidaam’.
Jshua Wong wuxuu bartiisa tweetarka uu ku qoray tallaabbadan ay Beijing qaadeyso iney tahay “mid lagu aamusinayo shacabaka Hong Kong’ wuxuuna noqonayaa mid shacabka xoog iyo cabsi iney ku aamusaan lagu doonayo.
Shiinaha muxuu sidan u sameeynayaa?
Ila wareedyo ku sugan golaha koongaraska shiinaha ee NPC wuxuu sheegay Beijing iney intan ka badan sugeynin iney sharcigaasi Hong Kong meel mariso, iyada oo weli taagan yihiin mudaharaadyada rabshadaha wata iyo dhaqdhaqaaqyada dowladda looga soo horjeedo.
Ila wareedyo u warramay wargeyska South China Post wuxuu yiri “Mar dambe uma oggolaan doonno ficillada sida sumcad-xumida calanka dalka Shiinaha loo geysto ama dhaawaca sumcadda dalka looga geysanaya Hong Kong”.
Zhang Yesui ayaa shaaca ka qaday in sharciga lagu meel marinaya shirka golaha NPC
Beijing waxay cabsi aad u weyn ka qabtaa doorashada golaha sharci dejinta lagu dooranaya ee ka dhaceyso Hong Kong. Iyada oo ay doorashadi dowladaha hoose oo kal hore dhacday ay ku guuleysteen kooxa dimuqraadiyadda u ololeeya kaddibna doorashada lagu celiyey.
Zhang Yesui wuxuu sheegay talalabbada ay Beijing waddo inuu sii “hagaajinayo”, halka dal iyo labada nidaam
Xisbiga DAB ee ay taageerto Beijing “si buuxda ayuu u taageeray” qorshahaasi, iyaga oo sheegay inuu sharcigan “uu jawaab u noqon doono xaaladda siyaasadeed ee sanadaha cakirneyd ee Hong Kong.
Mudaharaadyada ayaa socday dhowr isbuuc
Waa sidee xaaladda sharci ee Hong Kong?
Hong Kong waxaa 150 sana gacanta ku haysay dalka Britain, ilaa iyo 1997-kii.
Dowladaha Shiinaha iyo Britain ayaa saxiixay heshiis looga magac daray, heshiiska wada jirka ee Sino-British, iyaga oo ku heshiiyey iney Hong Kong ay noqoto mid leh madax bannaani aad u sarreysa marka laga reeba arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga”, muddo 50 sana ah.
Wuxuuna heshiiskaasi dhaqan galkiisu soconayaa ilaa iyo 2047.
Heshiiskaasi iyada oo laga duulayo Hong Kong waxay hanatay nidaam sharci, xuduud iyo xuquuqo ay ka mid yihiin gole madax bannaan iyo xorriyadda hadalka uu yahay mid ilaashan.
Balse Beijing wuxuu heshiiskaasi siinayaa awoodda diidmada qayaxan iyo iney wax ka beddesho nidaamka siyaasadeed oo ay ka mid yihiin iney hoggaamiso doorashooyinka Hong Kong ka dhaca.
Hong Kong 2019-kii, waxaa ka billaawday mudaharaadyo, inkasta oo ay yaraadeen wixi ka dambeeyey marka uu dillaacay cudurka safmarka ee coronavirus.
Balse weli xiisaddu wey taagan tahay, sida ka muuqatay jahwareerka Isniinti ka dhacday golaha sharci-dejinta ee Hong Kong, qaar ka mid ah xubnaha sharci dejinta ee halkaasi rabshadaha ka waday golaha laga saaray golaha xilli ay socotay heesta qaran ee Shiinaha xilli ay socotay heesta astaanta u ah dal weynaha Shiinaha.
Golaha Horumarinta Sallaxley Oo Toban Taangi Biyood Kuwareejiyay Barakacayaasha Degmada Salaxley + Muuqaal
Maamulka Degmada Sallaxley Ayaa Kormeeray Deegaano Uu Ka Dilaacay Koron korada Ayaxu + Muuqaal
” Cidii Warkaa Naga Faafisay Sharcigaanu La Tiigsanaynaa ” Gudoomiye Kuxigeenka Gobolka Togdheer + Muuqaal
” Baaq Shacab Anigu Odhan Maayo Waa Markale Aynu Luno ” Xildh Naasir Cali Shire + Muuqaal
” Somaliland Ma Dacwayn Karto Hubka Soomaaliya ” Siyaasi Cadami + Muuqaal